Mika 7 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nneɛma bɔne a Israelfo yɛe (1-6)
Onipa fifo na wɔbɛyɛ n’atamfo (6)
“Mede ntoboase bɛtwɛn” (7)
Wobegye Onyankopɔn nkurɔfo (8-13)
Mika bɔɔ mpae, na oyii Onyankopɔn ayɛ (14-20)
Yehowa mmuae (15-17)
‘Hena na ɔyɛ Onyankopɔn te sɛ Yehowa?’ (18)
7 Asɛm ato me! Mayɛ sɛ obi aWatetew ahohuru bere mu nnuaba,Na wasesaw bobe ase nkae,Nanso minnya bobe a medi,Na borɔdɔma a edi kan a me* kɔn dɔ mpo abɔ me. 2 Ɔnokwafo ayera afi asaase so;Obiara nni hɔ a ɔteɛ wɔ nnipa mu.+ Wɔn nyinaa tetɛw sɛ wobehwie mogya agu.+ Obiara kura asau a ɔrehwehwɛ ne nua ayi no. 3 Wɔn nsa nim bɔne di paa;+Ɔpanyin bisa biribi,Ɔtemmufo bisa akatua,+Otitiriw ka nea ne kɔn dɔ,*+Na wɔka wɔn ti pam ho bɔ pɔw.* 4 Wɔn mu nipa a oye paa no te sɛ nsɔe,Nsɔe a wɔde agye ban mpo, eye sen wɔn mu nea ɔteɛ paa. Ɛda a w’awɛmfo kaa ho asɛm ne bere a wubebu akontaa no bɛba.+ Afei wɔn ho bɛpopo.+ 5 Munnnye mo nnamfo nnni,Na mommfa mo werɛ nnhyɛ ɔyɔnko berɛbo mu.+ Nea ɔda wo kokom mpo, hwɛ w’ano yiye wɔ ne ho. 6 Efisɛ ɔbabarima bu ne papa animtiaa,Ɔbabea sɔre tia ne maame,+Na ɔbea warefo sɔre tia n’asebea;+Onipa fifo na wɔyɛ n’atamfo.+ 7 Nanso me de, Yehowa ara na mehwɛ no kwan.+ Mede ntoboase bɛtwɛn* me nkwagye Nyankopɔn no.+ Me Nyankopɔn betie me.+ 8 Me tamfo,* nni me ho ahurusi. Mahwe ase de, nanso mɛsɔre;Mete sum mu de, nanso Yehowa bɛyɛ me hann. 9 Mɛsoa Yehowa abufuw,Efisɛ mayɛ no bɔne.+Mɛsoa akosi sɛ obedi m’asɛm ama me na wabu atɛntrenee ama me. Ɔde me bɛba hann mu,Na mehu ne trenee. 10 Me tamfo no nso behu,Na aniwu pɔtɔɔ bɛka nea obisaa me sɛ, “Wo Nyankopɔn Yehowa no wɔ he?”+ no. Mede m’ani bɛhwɛ no. Afei wobetiatia no so te sɛ kwan so atɛkyɛ. 11 Ɛbɛyɛ da a wɔbɛto w’abo afasu;Saa da no, wɔbɛtrɛw ɔhye no mu.* 12 Saa da no, wɔbɛba wo nkyɛn.Wobefi Asiria ne Egypt nkurow mu tɔnn na aba.Efi Egypt kosi Asubɔnten no* ho tɔnn na wobefi aba.Efi ɛpo kosi ɛpo, ne bepɔw kosi bepɔw; wobefi hɔ nyinaa aba.+ 13 Na asaase no sofo nti, asaase no bɛdan amamfo.Wɔn nneyɛe nti,* ɛbɛdan amamfo. 14 Fa wo poma yɛn wo man, wo nguan a wɔyɛ w’agyapade no,+Wɔn a na wɔn nko ara te kwae mu, wɔ turo mfinimfini no. Ma wonnidi wɔ Basan ne Gilead+ te sɛ tete mmere no mu. 15 “Sɛnea meyɛe bere a worefi Egypt asaase so no,Mɛma wahu anwonwade.+ 16 Aman behu, na wɔn ahoɔden nyinaa akyi, wɔn ani bewu.+ Wɔde wɔn nsa bɛto wɔn ano;Wɔn aso besiw. 17 Wɔbɛtaforo dɔte te sɛ ɔwɔ;+Wɔde ahopopo bepue afi wɔn abannennen mu aba te sɛ asaase so mmoa a wɔtwe wɔn ho ase. Wɔde ehu bɛba Yehowa yɛn Nyankopɔn anim,Na wobesuro wo.”+ 18 Hena na ɔyɛ Onyankopɔn te sɛ wo,Nea ɔde mfomso kyɛ na oyi n’ani fi n’agyapade a aka no mmarato so?+ Ɔrenkura n’abufuw mu daa,Efisɛ n’ani gye ho sɛ ɔbɛda ɔdɔ a enni huammɔ adi akyerɛ nkurɔfo.+ 19 Ɔbɛsan ahu yɛn mmɔbɔ;+ obedi yɛn mfomso so nkonim.* Wobɛtow wɔn bɔne nyinaa agu ɛpo ase tɔnn.+ 20 Wubedi Yakob nokware,Na woada ɔdɔ a enni huammɔ adi akyerɛ Abraham,Sɛnea wokaa yɛn agyanom ntam fi tete mmere no.+
^ Anaa “ne kra kɔn dɔ.”
^ Nt., “wɔbom nwene.”
^ Anaa “Mede ɔtwɛn honhom bɛtwɛn.”
^ Hebri mu no, asɛmfua a wɔde gyinaa hɔ maa “tamfo” no kyerɛ sɛ ɔbea ho asɛm na wɔreka.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “asɛm no bɛwɔ akyirikyiri.”
^ Kyerɛ sɛ, Eufrate.
^ Nt., “Esiane wɔn nneyɛe so aba no nti.”
^ Anaa “obetiatia yɛn mfomso so; ɔbɛbrɛ yɛn mfomso ase.”